विन्टरचोक, हिउँद र समयको तापक्रम | BLOGSTREET
हो, विन्टरचोक बडा गुल्जार छ। गुल्जार के अर्थमा भने विन्टरचोकमा अचेल गर्मी छ। यो हिउँदमा कसरी गर्मी?
चुनावको प्रचारात्मक स्वेटर ज्याकेटले गजधम्म मोटाएको विन्टरचोक कपडाको न्यानोले गर्मी भएको भने होइन। विन्टरचोकमा बिहानै जिब्रो पड्काउँदै उपस्थित हुने मुस्तण्डेहरुदेखि लिएर क्याम्स हिंड्ने षोडसीहरुसम्म, पाइलट चुरोटको सर्कोले फुटपाथको हावालाई बिहानैदेखि कुइरीमण्डल बनाइरहेका नाम्लोकर्मीहरुदेखि त्रीपल फाइभको गन्धले क्याफे-रेष्ट्राँलाई नशालु बनाइरहेका एलिट किट्टी पार्टी बुध्दिजिवी महिलासम्म बहसमा छन् र समयको पारो तताउन आगो फुकिरहेका छन्।
पत्रिकामा गाली स्तम्भ बेचिरहेका नागरिक सचेतकहरुदेखि लिएर कलमको नीबले सत्तालाई चिथोरिरहेका कलमजिवीहरुले दाउरा जोहो गरिदिएकै छन्।
‘फूलमालाको छोप’ले अमिलिएका जनप्रतिनिधिहरु त हिटर नै बोकेर हिंडेका छन् । विन्टरचोक यसैकारण तातेको छ।
रोचक त के भने यो गर्मीको रापबाट बच्न हो कि राप बढाउन, सबैले अजिवका तर सुन्दर चश्मा लगाएका छन् । कसैले समृध्दिको चश्मा लगाएका छन्, कसैले विकासको चश्मा लगाएका छन्, कसैले अधिकारको चश्मा लगाएका छन्, कसैले संविधानको चश्मा लगाएका छन्, कसैले सपनाको चश्मा लगाएका छन्। चश्माबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्राइस ट्याग भने कसैले निकालेका छैनन्।
विन्टरचोकमा प्राइस ट्यागसहितको चश्मा ढल्काउँदै गफ चुट्नु यगीन फेशन हो। फेशनको विरोध गर्नेहरुका लागि यो संस्कार हो। परम्परा र रुढीवादका विरोधीहरुका लागि यो क्रान्ति हो। शसस्त्र क्रान्तिका विरोधीहरुका लागि भने यो प्रोग्रेसिभ लाइफ स्टायल अर्थात प्रगतिशील जीवनशैली हो।
अब विन्टरचोकमा फैलिएको यो उखरमाउलो गर्मी कति समय टिक्छ, त्यो कसैले भन्न नसक्ला। विधि र शासनको बडे बडे विश्वविद्यालय पुस्तकबाट फोटोकपी गरेर बसेका नन-डिफिटेबल कानूनवेत्ता र तर्कशास्त्रीले पनि भन्न सकिरहेका छैनन् कि विन्टरचोकको यो तापक्रम कहिले घट्छ, न त हरेक दिन बिहान मौसमको पूर्वानुमान गर्ने कपाल फुलेका टिभी स्टारहरुले भन्न सकिरहेका छन् न ट्वीटर फेसबुकमा देशको भविष्यवाणी गर्ने स्वनामधन्य ज्योतिष शास्त्रका वेत्ताहरुले ।
निष्कर्ष के मात्रै भने विन्टरचोकमा गर्मी छ। तर यो गर्मी रमाइलो छ, विन्टरचोकले अब अग्रगामी छलाङ् मार्छ भन्ने आशा र विश्वास जो छ। यहाँ अब सडक नपुगेका गल्ली हुने छैनन्, कतै नाम दर्ता नभएको सुकुम्बासीको सिमेन्टको छाप्रोमा अनुदानमा आधारित धारोमा समेत चौबिसै घण्टा पानी आउनेछ, बिजुलीको कुरा त पुरानो भइसक्यो बरु अब फ्री वाइफाइ जोनको प्रभावले नै घर-घरमा दाल भात पाक्नेछ। दुर्गमबाट आप्रवासनमा विन्टरचोकमा आएकाहरु स्वाभिमानको घर फर्केर गौरवको उद्मम गर्नेछन् आफ्नै दैलामा।
अधिकार र स्वशासनको लाली पाउडरले मान्छेहरुको अनुहारको रंग बदलिन अब कुनै आइतबार कुर्नपर्ने छैन। अभाव र गरिबी जस्ता पुरातन र पश्चगामी शब्द लोप हुनेछन् । विन्टरचोकको प्रति व्यक्ति आय कति पुग्छ भन्ने अनुमान लगाउन अब विश्व बैंकका अर्थ वेत्ताहरुलाई माइग्रेन हुनेछ । राष्ट्रियताको टोपीको व्यापार अन्तरदेशीय हुनेछ, अन्तरदेशीय भन्दा पनि विश्वव्यापी हुनेछ जुन विन्टरचोकको नाफाकै लागि मात्रै हुनेछ । यस्ता अनेक कुरा पो छन् त विन्टरचोकमा । यत्तिकै कहाँ गर्मी हुन्छ ?
मान्छेहरुको दैनिकीमा कहाँ फरक पर्ला त? निधार खुम्च्याएर समृध्दिको चश्माको डीलमाथिबाट सोध्ने ‘वैद्य’लाई कसैले जवाफ दिएको सुनेथें,’३ घर पर भएकी गर्लफ्रेन्डहरुसँग बोइफ्रेन्डहरुले भर्चुअल्ली सेक्स गर्ने पाउनेछन्, प्राकृतिक चरम आनन्दसहित।’ विज्ञापनमा पनि त्यस्तै सुनिन्छ। क्याम्पस हिंडिरहेका ती षोडसीहरु उत्तेजित छन्। मुस्तण्डेहरु पनि अराजक हुन्छन् कि भन्ने डर नभएको होइन।
बटम लाइनमा विन्टरचोक गर्मीले पग्लिएर हिलोमा विलय होला कि भन्ने चिन्ता मात्रै बाँकी छ।
फोटो स्रोत: Artpal.com
यो पनि पढ्नुहोस् : विन्टरचोक, वार सेन्सेसन र फ्रीकहरु
This entry was posted in BHAKKANO; the reality, In Nepali and tagged reality, sarcasm, satire. Bookmark the permalink.